မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXX | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXX
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXX
သမတဟောင်း Obama အိုဘားမားလက်ထက်မှာ စွမ်းအားဝန်ကြီး နှစ်ဦး ရှိခဲ့တယ်၊
နှစ်ဦးစလုံးထူးချွန်ပြောင်မြောက်ကြ သူ ပါမောက္ခတွေပါ၊
ကြီး Stanford တက္ကသိုလ် မှာစာပြဋ္ဌာန ကြီးမှူး ဆရာကြီး
စွမ်းအားဝန်ကြီး Moniz မွန်နဇ် က De Brito (ငဇင်းဂါးလို) ပ်ါတူgeဇာတိနွယ်ဘွား အမေရိကန်ပေါက်ဖြစ်ပြီး၊
အနုမြူလက်နက်မပြန့်ပွါးရအောင် အီရန်နိုင်ငံနဲ့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပွဲက အရေးပါတဲ့အပိုင်းမှာ
သူ့လက်ထက်မှာ ရအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမျော်မှန်းချက်ကိုပြုစုနိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းအစီရင်ခံစာကိုဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်၊
Steven Chu စဗင်ချူးကမွန်နစ်ရဲ့နောင်တော်ဝန်ကြီးပါ၊သူကတရုပ်ဇာတနွယ် အမေရိကန်ပေါက်
ဖြစ်ပြီး နနံမယ်ကြီး နနိုဘယ် ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်၊
သူတို့စွမ်းအားဝန်ကြီးနှစ်ဦးက ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ပေါ်လစီ က သိပ်မကွာလှပါ၊
ရေအားလျှပ်စစ်ကို (ကန့်ကွက်ဘို့နေနေသာသာ)၎င်းကို အားပေးကြတယ်၊အရေးပေးတယ်၊ရေကာတာ
အသစ် တိုးချဲ့ဆောက်တည်ဘို့ကို၎င်း၊ရိုးရိုးဆည်တွေကိုတောင်လျှပ်စစ် စွမ်းအားပါထုတ်နိုင်ဘို့ကို၎င်း
Steven စတီဗင် ကအနုမြူလျှပ်စစ်၊လေအားလျှပ်စစ် နဲ့နေအားလျှပ်စစ်ပါတိုက်တွန်းသော်လည်း
သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ် အချို့က ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် ကြီးတယ်ဆိုပြီး
Green Rivers Network နဲ့ဆရာဦးထွန်းလွင်တို့ရဲ့ ရေအားလျှပ်စစ် ရေကာတာ အားလုံး ရပ် ဆိုတဲ့
ရအားလျှပ်စစ်စွမ်းအား ဟာ ယခင်က(အရေးပါတဲ့)စွမ်းအားတရပ်
ဖစ်ခဲ့တယ်၊ခုလဲဒီ တိုင်း၊နောင်လဲ ဒီတိုင်း(အမြဲတစေ အရေးပါမဲ့)စွမ်းအားတရပ်
(နဂိုရ်က အလွန်ကြီးမှား တာကြောင့်)
ဒီလို၂ ဆ ဆိုတာက အင်မတန်ခ ကြီးမားတာ ပါဘဲ
လက်ရှိရေကာတာ မှာ ပိုစွမ်းတဲ့လျှပ်စစ်Turbine တာဘိုင်စက်ခေါင်းလဲရုံ
နဲ့အခြား အသေးစား ရကာတာ ဖည့်စွက်ရုံနဲ့ဘဲ
၇၅၀၀၀ MW လျှပ်စစ်စွမ်းအား တိုးထုတ်လုပ်နိုင်းမယ် လို့ဝန်ကြီး
Steven စဗင် ကအစိုးရ စည်းဝေးပွဲမှာပြောပါတယ်၊
လက်ရှိက ၉၈၀၀၀ MW လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊လူပေါင်း
(၂၀၁၁ က မြန်မာ သုံး လျှပ်စစ်က ၆၀၀ MW နဲ့ယှဉ်ရင် အဆ
ပေါင်း ၁၆၀ ဆ ကျော်လို ဇီစေ့နဲ့မြင့်မိုရ်တောင်ပါ၊
တဘက်ကAmerican မြင့်မိုရ်တောင် နောက်တလုံး တိုးမှာဖြစ်ပြီး
တဘက်ကြတော့Myanmar လက်ထဲက ဇီးစေ့ ပါ ပျောက်သွားမလား
၂၀၀၉ က ဝန်ကြီး Steven စတီဗင် န်ာဝေရေအားလျှပ်စစ် ရကာတာစက်ရုံတွေကို
.ရေအားလျှပ်စစ်တော့ ဘယ်လို စခန်းသွားကြမယ် မသိ။
.လေအားလျှပ်စစ် လုပ်ဖို့ ဆိုပြီး ပညာရှင်တချို့နဲ့ နယ်ဒေသတွေကို လေ့လာရေး ထွက်/အခြေအနေ လေ့လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်အုပ်နဲ့… ကျနော် ပါသွားဖူးတယ်။
.လေအားလျှပ်စစ် ထုတ်ရာမှာ တည်ရမယ့် ပန်ကာဒလက်လို ဟာကြီးတွေ… ဘာတွေ ညာတွေ…
နယ်ဒေသ မြစ်ကမ်းဘေးတို့ တောင်ကုန်းပေါ်တို့ကို အရောက်သယ်ရမှာကြောင့် လမ်း/တံတား အနေအထားကိုပါ ထည့် လေ့လာကြတာ…
လမ်းတွေက သုံးစား မရဘူး။ တန်ချိန်များများ တင်လာတဲ့ ကားကြီးတွေအတွက် အဆင်မပြေဘူး။
.ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကလည်း… မြစ်တော်တော်များများမှ သောင်တွေထွန်း….
မြစ်ကို စနစ်တကျ ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း မရှိရှာ….
ဆိုတော့ .. ဗမာပြည်အတွက်… ဥုံဖွဆိုပြီး တတိုင်း ရစေမယ့် တန်ခိုးရှင်တွေသာ လွှတ်ပေးပါတော့ ဘုရားသခင်…လို့ ညည်းရမလား…
တော်တော် ဝဋ်ကြီးတဲ့ ဗမာပြည်လို့ ညည်းရမလားပဲ